राजन र गगनमा को जित्ने भन्दै कपनका चोक चोकमा बाजी ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
राजन र गगनमा को जित्ने भन्दै कपनका चोक चोकमा बाजी !
काठमाडौं । सोमबार बिहान कपनको मिलन चोकको बुद्धिस्टेशनरी अगाडि दुई ब्यापारीबीच ठूलो चर्का चर्की देखियो । त्ये चर्का चर्की कुनै ब्यापारका बिषयमा नभएर यो चुनावमा क्षेत्र ४ मा राजन जित्ने कि गगन जित्नेमा भन्ने थियो ।
यसरी चर्का चर्की गर्नेहरु थिए कपन पंचकुमारीका नरेन्द्रराज ओली र मिलन चोकका नवराज बन(नविन) । ओली कस्सिए यसपटक यस क्षेत्रमा भट्टराईले जित्छन । तर वनलाई के चित्त बुझ्थ्यो उनले फेरि जवाफ फर्काए भो भो थापाले कुनै हालतमा जित्छन । त्यसपछि भट्राईले जित्ने तर्क अगाडि सार्दै ओलीले भने ‘दश बर्षमा यस क्षेत्रबाट संसाद भएर के गरे थापाले , कपनको बाटो हेरयो भने त बैराग लागेर आउछ’। ओलीको भनाईको प्रतिवाद गर्दै संसदमा गगनले खेलेको भूमिका र संविधान बनाएको दावी बनले गरे ।
त्यस पछि उनीहरुको बहस यतिमा मात्र सिमिति रहेन वनले भने ‘लौ यहाँं गगनले नै जित्छन् नभए बाजी राखौ’। त्यसपछि ओली पनि किन चुपा लाग्थे, लौ राखौ यस क्षेत्रमा यो पटक राजननै चुनाव जित्छन‘ । अन्तिममा दुबैजना ५ । ५ हजार बाजी राख्न तयार भए। । त्यस पछि उनीहरुले मिलन चोकका अर्का व्यापारी निरन्जन नेपाल र बुद्धिस्टशनरीका राजन न्यौपानेको रोहबरमा बाजी राखे। दुबै संग लिएको रकम न्यौपानेले राखेर मध्यस्थकर्ताको भुमिका निर्वाह गरे ।
अहिले क्षेत्र नं ४ मा राजन र गगन को जित्ने भनेर यस्ता बाजी चोक चोक, चिया पसल रेष्ट्रेन्टहरुमा हुने गरेको छ। कारण थियो दुबै उम्मेदवारको हेभिवेट ।
काठमाडौको क्षेत्र नं ४ अहिले जसरी चुनाव तातेको छ यस भन्दा अघिल्ला निर्वाचनमा यसरी तातेको थिएन । गगन थापा यस भन्दा अगाडि समानुपति र त्यो भन्दा पछि प्रत्यक्षमा गरि ६ बर्ष यस क्षेत्रका प्रतिनिधि भईसकेका छन । तर राजन नयाँं र हेििभवेट उम्मेदवार हुन। उनी चाबहिलका स्थानीय बासिन्दा हुन् । अघिल्ला चुनावमा गगनको सिधै माहौल देखिन्थ्यो । तर अहिले राजनको माहोलले गगनलाई चुनौती दिएको छ। साझा वामगठबन्धनका उम्मेदवार राजनको प्रभावले गगनलाई टक्कर दिन थाले पछि यो क्षेत्रको चुनाव चर्चामा छ ।
सोमवार विहान कपनको मिलन चोकमा वाजी राख्दै स्थानीय व्यापारी द्वयः नरेन्द्रराज ओली र नवराज बन